Wararka - Sawir kooxeed qaar ka mid ah shaqaalaha
Sawir kooxeed shaqaalaha qaarkood
Sawir koox ka mid ah shaqaalaha
Maareeyaha guud Wu Yunfu ayaa hadal soo dhaweyn ah ka jeediyay shirka. Wuxuu soo dhaweyn diiran u sameeyay dhamaan martida wuxuuna uga mahadceliyay taageeradooda mudada dheer ee horumarinta Lujury, wuxuuna u soo bandhigay heerka horumarineed ee haatan jira iyo qorshaynta mustaqbalka ee Lujury si dhameystiran oo faahfaahsan.
Maamulaha guud Wu Yunfu ayaa hadal jeediyay
Wu Yunfu wuxuu yiri: Ujeedada qabashada madasha sedexaad ee tayada alaab-qeybiyeyaasha ayaa ah in aan gudbino fikradaheena, dhageysano soo jeedimahaaga, ku guuleysano taageeradaada, soo bandhigno shuruudaheena, qoto dheer dareenka labada dhinac si loo gaaro xaalad guul-guul ah.
Wu Yunfu wuxuu tilmaamay in tan iyo markii la aasaasay Lujury marwalba ay aaminsantahay in "tayada ay tahay aasaaska shirkada" mudo 18 sano ah, ayna la yeelatay saaxiibtinimo qoto dheer saaxiibada ay wada shaqaynta leeyihiin. noocyo badan oo baabuurta korantada caanka ku ah, sida AIMA, LIMA, LUYUAN iyo SLANE Waqtigan xaadirka ah, Lujury waxay soo bandhigtay halkudhigga ah "abuurista mustaqbal qalbi leh". waa cusub iyo safar cusub, waxaan si joogto ah u abuuri doonnaa bilic cusub.
Kuxigeenka maareeyaha guud Zhang Juqin ayaa kaqeybgalay kulanka
Marka la eego sida loo xaqiijiyo faa'iidooyinka is-waafajinta iyo wada-guuleysiga, Wu Yunfu wuxuu soo jeediyay in alaab-qeybiyeyaasha lagu qiimeeyo aragtiyo badan.
Marka hore, waqtiga la keenayo: Imaatinka agabku waqtigiisa waa muujinta sharafnimada shirkadda. Furaha wadashaqeynta guuleysiga ayaa ah daacadnimo.
Ta labaad, tayada: In la xoojiyo xakamaynta tayada wax soo saarka warshaddii hore lana yareeyo soo noqoshada.
Saddexaad, adeeg: In kor loo qaado tayada adeegga ee ku saleysan xaqiiqda.
Tan afraad, horumarinta wax soo saarka cusub: ikhtiraaca cilmiga iyo teknolojiyaddu waa xoogga dhaqaajiya horumarka shirkadda, R&D-na waxay u baahan tahay iskaashi labada dhinac ah, hal-abuurnimaduna waxay kicin doontaa muuqaalka xaalad-guul-guul.
Agaasimaha farsamada Peng Hao ayaa jeedinaysa khudbad
Peng Hao waxay ku sharaxday tayada teknolojiyadda saddexda qodob ee soo socda, kuwaas oo kala ah adeegga, hal-abuurnimada iyo tayada.
Marka hore, adeeg. Ku dhowaad shirkad kasta oo muuqata waxay u aragtaa adeegga inuu yahay "halbawlaha" badbaadada shirkadda. Shirkad kasta oo iska indha tirta adeegga kuna guuldareysata qancinta macaamiisha 'waxay ku xiran tahay inay hoos u dhacdo.
Ta labaad, hal-abuurnimo. Maalin cusub ayaa maalin cusub sameysa. Si loo xaqiijiyo horumar iyo hawlgal joogto ah, ganacsatadu waa inay si joogto ah isu cusboonaysiiyaan.
Saddexaad, tayo. Horumar wanaagsan, shirkaduhu waa inay xoogga saaraan muhiimada tayada wax soo saarka, taas oo ah nolosha shirkadaha. Iyadoo aan la aaminin macaamiisha tayada wax soo saarka, nolosha shirkadaha waa la gaabin doonaa.
Wu Yuqun, Wasiirka Xakamaynta Waxyaabaha ayaa bayaan soo saaray.
Kulankani wuxuu dejiyey barxad wanaagsan oo loogu talagalay isgaarsiinta qotada dheer ee udhaxeysa Lujury iyo alaab-qeybiyeyaasha, waxaana la gaarey ujeedkii laga filaayey ee ahaa is afgarad iyo is-dhexgal qoto dheer. Kulanka ka dib, dhamaan dhinacyadu waxay sheegeen inay ka faa’iideysan doonaan fursadan si loo sii xoojiyo isgaarsiinta, kor loogu qaado fikirka iskaashiga, loogana wada shaqeeyo sidii loo gaari lahaa xaalad guuleysata mustaqbalka.